လောဘ-ဒေါသ……စိတ်ညစ်စရာ သောက… stress.. အခက်အခဲ …..ပြဿနာအားလုံးရဲ့ တရားခံ ဘယ်သူလဲ?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လောဘ-ဒေါသ……စိတ်ညစ်စရာ သောက… stress.. အခက်အခဲ …..ပြဿနာအားလုံးရဲ့ တရားခံ ဘယ်သူလဲ??
Posted by uzin on Nov 25, 2011 in Copy/Paste |5comments
အနီးအနား နှိုင်းယှဉ်စရာ တစ်ဦးဦး မရှိပါကလည်း မနေ့က ငါ နှင့် ဒီနေ့ ငါ ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် သင့်တယ် ……
ရင်လှုပ်ခတ်စေတဲ့ အရေးအသားပါ …၊
မျက်တောင်မွေးတစ်ဆုံးလောက်ပဲကြည့်တတ်ကြတဲ့ ကျုပ်တို့အားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာလေးပါ…၊
သူများကို မကြည့်ခင် မိမိကိုယ်မိမိ အရင် စောင့်ကြည့်သင့်ပါကြောင်း တွေးနေမိပါတယ်…။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်တာတရားခံ ဘယ်သူလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်ပါပဲ။
အနည်းငယ်သိသော အသိလေးကို Share လိုက်ပါတယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ စသော အချက်တွေကို ဗုဒ္ဓဘုရားက ကိလေသာတွေလို့ ဟောကြားထားပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ လူတွေကို အဖြစ်ဆိုးသူအဖြစ် ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိလေသာ(၁၀)ပါးကို သမုဒယအရိယသစ္စာဟု အမည်သတ်မှတ်ပြီး ပယ်သတ်ရန်ကိစ္စရှိတယ်လို့ ဟောကြားခဲ့တာပါ။
ဒီကိလေသာ (၁၀)ပါးထဲတွင် ဘယ်သူကဦးဆောင်လဲဆိုရင် မောဟ(အ၀ိဇ္ဇာ)ဆိုတဲ့ မသိမှုပါ။ ဒီနေရာမှာ မသိမှုဆိုတာ ဘာကိုမသိတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဟိုဟာမသိ၊ ဒီဟာမသိကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါသတွေတွက်ပြီး အခြားသူကိုတုန့်ပြန်၊ လောဘတွေကြီးပြီး သိမ်းဆည်းရယူလိုမှု စတာတွေကို အပြစ်လို့ မမြင်ဘဲ ငါ့ပြောလို့ပြန်ပြောတာ၊ ငါ့အတွက်ငါယူတာ၊ ငါဒီလိုဒေါသတွေထွက်နေတာ၊ ငါလောဘတွေကြီးနေတာ အကောင်းပေါ့။ ဒါငါလုပ်တာပဲ၊ ဒီလိုလုပ်တာ ငါဘဲလို့ မြင်ပြီး၊ ကိလေသာနှင့် ငါကို အတူတူလို့မြင်တာဟာ ကိလေသာကို အပြစ်မပြင်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်မြင်တာဟာ မသိမှုပါ။